बैंकहरुले हचुवाको भरमा र सोसफोर्समा दिएको अनुदानको अर्बै कृषि कर्जामा व्यापक लुटको खेतीः राष्ट्र बैंक बेखबर - Aathikbazarnews.com बैंकहरुले हचुवाको भरमा र सोसफोर्समा दिएको अनुदानको अर्बै कृषि कर्जामा व्यापक लुटको खेतीः राष्ट्र बैंक बेखबर -
purchase essay paper need help research proposal your creative writing skills cover letter help for english who can do my homework teach child creative writing extended essay help ib victorian school punishment primary homework help doing good things essay best writing service essay homework helpers discord creative writing course japan abstract creative writing prompts plot line creative writing washington u mfa creative writing oregon state university mfa creative writing acceptance rate creative writing in france who can help with writingabusiness plan keywords in creative writing creative writing publishers i get anxiety while doing homework leeds beckett university creative writing universal creative writing eric harris creative writing chronological order of essay canterbury christ church university creative writing diploma in creative writing in english ignou study material creative writing nonfiction definition mfa creative writing ucsd do my homework turkce anlami
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुले सरकारी अनुदानको सहुलियत कृषि कर्जामा दिएको अर्बै पैसामा व्यापक लुटको खेती भएको भेटिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पिउनदेखि गर्भनरको दबाब र हचुवाको भरमा नेपालका बैंकहरुले जनताको डिपोजिटको पैसामा दिएको अर्बौको कृषि अनुदान कर्जामा लुटको खेती जारी रहेपनि नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर झै बन्नु कति उचित होला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ?
२७ वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका पिउनदेखि गर्भनर र अर्थमन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मको चर्को दबाबमा दिएको अर्बो गरिब जनताको पैसामा लुट मच्चाउनु कति उचित होला ? यो चाहि खोजीकै बिषय अब बनेको छ ।
सरकारले ५÷६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिएको कृषि अनुदान कर्जामा किन लुट मच्चिको छ ? यो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सरकारले चालु वर्षमा १२ अर्ब ९६ करोड अनुदान कर्जा छुट्याएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाहरुमा दुरुपयोग र प्रभावकारीता नभएको भन्दै बैंकका सीइओहरुलाई तत्कालै विवरण पठाउन निर्देशन दिएको नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक पीउनदेखि गर्भनरकै दबाबमा बैंकहरुले अनुदानको कर्जादेखि भूकम्प पीडितले पाउने २ प्रतिशतको कर्जा दिएको एक वाणिज्य बैंकका सीइओले पंक्तिकारलाई बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्ता सहुलियत कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग भएको प्रमाण फेला पारेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई विवरण माग्न मौखिक निर्देशन नै दिएको अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
बैंकका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिता, दूरुपयोग र प्रभावकारिताका बारेमा छलफल गरेको एक सीइओले पंक्तिकारलाई बताए ।
सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अनुदान जाने तर त्यसको नतिजा अपेक्षाअनुसार नआएपछि अर्थमन्त्रालयले चासो राख्नु स्वभाविक देखिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु ग्रे एरियामा गएको थुप्रै उदाहरण भेटिएको देखिन्छ । कृषि कर्जा भनेर १० करोड जाँदा ८ करोड जग्गा खरीदमै प्रयोग भएको भेटिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।
नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्यले पंक्तिकारलाई भने प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ । यसबाट सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा केही संशोधन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसैले अध्ययन गरेर सुझाब दिने निर्णय हामीले गरेका छौं । नि !
बैंकहरुको अनुगमनमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । लक्षित वर्गले यो कर्जा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढि गएको कृषि कर्जा धनीमानीले मात्रै चलाइरहेको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् । महिलाका लागि दिइने कर्जा पनि धनीमानी, पहुँचवाला र उच्चकर्मचारीका आफन्ताले मात्र चलाएको र घरजग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
जसका लागि सहुलियत ल्याइएको हो तिनीहरुसम्म यो कर्जा पुगेको छैन । ’त्यसैले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर लक्षित वर्गमा कर्जा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यो कस्तो बिडम्बना हो गर्भनर साब ? तत्कालै छानवीन होस् र बदमासी गर्ने माथी ठाडो कारबाही हुन जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।